नेल पोलिश भरिने मेसिन बिक्रीको लागि - Npoat.com
यो मेशिन मुख्य रूपले विभिन्न सामग्री राउन्ड बोतल, फ्ल्याट बोतलहरूमा लागू हुन्छ। भरिने सामग्री औषधी तरलको सानो डोज हुन सक्छ, जस्तै आईड्रोप, सिरप, आयोडिन, र इलिक्विड आदि पेरिस्टालिक पम्पले भरी तरल सफा राख्दछ, उच्च नाप्ने सटीक छ।
मेशिनले स्टेनलेस स्टील 4०4 प्रयोग गर्दछ, पार्ट टच तेल स्टेनलेस स्टील 6१6 हो
पीएलसी नियन्त्रण, टच स्क्रिन अपरेशन, फिलि mechanicalले मेकानिकल शाफ्टलाई जोड्ने डन्डा प्रकार ड्राइभ ग्रहण गर्दछ, चेन उपकरणको सट्टामा, जुन समायोजन गर्न थप सुविधाजनक हो, र अधिक शुद्ध।
गणना नभएको खण्डमा र अलार्म प्रकार्य भएमा यो स्वचालित रूपमा रोकिन्छ।
स्टार व्हील, भाइब्रेटर आदि परिवर्तन गरेर बिभिन्न बोतलहरूका लागि उपयुक्त यो सिरप, तेल इत्यादि भरिनेमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ जीएमपी आवश्यकता पूरा गर्नुहोस्। अद्वितीय kn चाकू क्याप-रोलिंग ब्लेड अपनाउनुहोस्, यो स्थिर छ, उत्तम सिलि and र राम्रो छ।
मेशिनले बोतललाई खुवाउने, भर्न गर्ने, भित्री प्लग राख्ने र बाहिरी कभरहरू स्वचालित रूपमा क्याप गर्ने सबै कामहरू समाप्त गर्यो।
यो विभिन्न आकारको बोतल र प्लास्टिकका बोतलहरूमा लागू हुन्छ: पीपी, पीई, पीवीसी, गिलासको बोतल र मोल्ड बोतल। बोतल-भित्र र बोतल-आउटको विशेष संरचना हुन्छ। यो बोतल वा चुप बोतलहरू छोड्दैन।
PLC नियन्त्रण, सरल र अपरेट गर्न सजिलो।
तरल औषधि छुने अंश जीएमपीको आवश्यकता पूरा गर्दै 31१6L स्टेनलेस सामग्रीको पूर्ण रूपमा बनेको हुन्छ।
कारखाना निर्माता न्युमेटिक नेल पॉलिश रोटरी भरने उपकरण साना निर्माण मेशिनहरू बोतल धुने मेशीन र लेबल-अटैचिंग मेशिनसँग जोडियो जुन उत्पादन लाइनको पूर्ण सेट बनाउन सक्दछ।
के तपाईं नेल पॉलिश व्यवसाय सुरू गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ? के तपाई गुणस्तरीय भरिने मेसिन किन्नु पर्छ? ठीक छ, तपाईं सही गन्तव्यमा पुग्नुभएको छ। हामी बजारमा एक अग्रणी भरिने मेसिन निर्माणकर्ताहरू हौं। हामी हाम्रा ग्राहकहरुलाई नेल पोलिश भरिने मेसिनको ठूलो दायरा प्रदान गर्दछौं। हामी भर्खरैको टेक्नोलोजी र गुणस्तरका सामग्रीहरू प्रयोग गर्ने मेसिन निर्माण गर्न प्रयोग गर्दछौं।
नेल पोलिस फिलिंग मेशिन - उन्नत सुविधाहरुबाट सुसज्जित
हाम्रो भरिने मेसिन विशेष नेल पॉलिश उद्योग आवश्यकताहरू पूरा गर्न डिजाइन गरिएको हो। हाम्रो भरिने मेसिन उन्नत सुविधाहरूको साथ आउँदछ जुन तपाईंलाई प्रक्रिया चाँडो र सजीलो गरी सक्दछ। हाम्रो विशेषज्ञहरु ग्राहक को आवश्यकताहरु बुझ्छ र भरिने मेसिन डिजाइन। हाम्रो भरिने मेसिनले उच्च प्रदर्शन प्रदान गर्दछ। हामीसँग उत्पादन विपणन गर्नु अघि मेशिन पार्ट्स र काम गर्ने अवस्थाको परीक्षण गर्न योग्य टोली छ।
कम मूल्यमा नेल पोलिस फिलिंग मेशीन खरीद गर्नुहोस्
हाम्रो भरिने मेसिन सफा गर्न को लागी सरल छ र तपाईं आफ्नो आवश्यकता अनुसार सजिलै गरी नेल पोलिश रंग परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ। एकल नोक भरिने मेशिन एल्युमिनियम निकासी द्वारा निर्मित छ। यो समायोजन गर्न को लागी सरल छ र हाम्रो मिसिनले पानीको समान तहले विभिन्न बोतलहरूमा कुनै पनि प्रकारको तरल भर्न सक्छ। हाम्रो भरिने मेसिन कम भोल्टेजको साथ डिजाइन गरिएको छ जुन स्पार्क्सलाई बेवास्ता गर्दछ। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सजिलैसँग जान सजिलो छ। हाम्रो नेल पोलिश भरिने मेसिनको स्थापना प्रक्रिया सरल छ। हामी डिस्काउंटमा भर्ने मेसिन प्रस्ताव गर्दछौं जसले तपाईंलाई यो मेशिन खरीद गर्नमा पैसा बचत गर्दछ।
सीई मानक उच्च गुणस्तर नेल पॉलिश बोतल भर्ने मेसिन भरिरहेको छ, भित्री प्लग, ट्याम्पोनेड भित्र, कभरमा, कभर अनस्क्रुभ गर्नुहोस्, पीएलसी नियन्त्रणको संरचनाको मुख्य भाग। क्याम ड्राइव मार्फत मेशीन, स्थिति सटीकता, स्थिर प्रसारण। PLC स्वचालित नियन्त्रण भर्न, आन्तरिक ट्याम्पोनेड, सम्पूर्ण प्रक्रियालाई क्याप गर्दै। स्वचालित इंजेक्शन मोल्डिंग मेशिन सिधै भरिने प्रणालीमा उड्ने बनाएर बनाउन सकिन्छ, क्रस इन्फेक्सन रोक्न सम्पूर्ण प्रक्रिया बाँझी अवस्थाहरूमा पूर्ण हुन्छ। बिना धुने र सुकाउनु नै। यो मेशिन नेल पोलिश, नाक ड्रपहरू, इयर ड्रपहरू, आवश्यक बाम र अन्य साना खुराक फार्मुलेसन भरणको लागि उपयुक्त छ।
आँखा ड्रप को सानो बोतल, नेल पोलिश भरिने मशीन र कपि मेसिन
अटो फिलिंग क्यापिंग मेशिन मेरो कम्पनीको स्वतन्त्र अनुसन्धान र स्वचालित भर्न र क्यापिंगको लागि एक पेशेवर शरीरको विकास द्वारा एक hight टेक्निकल उपकरण हो। यो एक प्रमुख घरेलु स्तर हो, एक नयाँ प्रकारको स्वत: फिलि,, क्यापिंग मशीन। यो मेशिनले डिस्क प्रकार फिलिंग मेशिन ह्यान्ड ह्या cover्ग कभर क्यापिंग, स्थिर र भरपर्दो, उच्च शुद्धता reaches 99% भन्दा बढीमा पुग्छ, मेशिनले आयातित उच्चलाई गोद लिन्छ।
स्वचालित २ नोजल जेल नेल पालिश भरिने मशिन बोतल भरिरहेको क्यापिंग मेशिन
धेरै लोकप्रिय आइसक्रीम भरने मेसिन / डबल हेड भरने मेसिन / नेल पोलिश फिलर मेसिन
उत्पाद डिस्क्रिप्शन यो मेशिन मुख्य रूपले कस्मेटिक सामग्री (तरल / पेस्ट) मात्रात्मक भरावको लागि प्रयोग गरिन्छ, पिस्टन-प्रकारको फुटस्विच सेमी-स्वचालित भराव, ट्या tank्क मुद्रास्फीति दबाव, भरिने सामग्री तरलतालाई बलियो बनाउँदछ। मात्रात्मक भरने को माध्यम बाट, सही सेट क्षमता, र सानो त्रुटि मान, ग्राहकको मांग को साथ लाइन मा। अपरेशन सरल, सफा गर्न सजिलो, र बहु प्रकारका अनुप्रयोगहरूको विस्तृत श्रृंखला ...